Indlela yokutshintsha ubungakanani bomfanekiso kwi-Photoshop: isifundo esilula kakhulu | Abadali be-Intanethi
Ungawenza njani ubungakanani bomfanekiso kwi-Photoshop
UNerea Morcillo | 10/05/2022 17:00 | Izixhobo zoYilo, Photoshop
Umthombo: Ukulungiswa kweMac
Xa sizinikele ekufotweni okanye ukufunda umfanekiso ngokupheleleyo, sinokuxabisa inani leepixels, apho iqulunqwe khona, kwaye akulindelwanga ukuba, ngexesha elithile kumsebenzi wethu, kufuneka senze utshintsho olubalulekileyo kwi nayiphi na into okanye umfanekiso..
Yiyo loo nto kule posi siza kuthetha nawe malunga notshintsho okanye uhlengahlengiso, kodwa ngeli xesha kwimifanekiso esiyenzayo okanye esiyikhuphela kwi-Intanethi. Siza kuthetha ngePhotoshop njengesixhobo esiphambili esikwaziyo ukutshintsha ubungakanani bomfanekiso, ngaphandle kwesidingo sokubuyisela umfanekiso okanye ukuwonakaliswa.
Ngaba siza kuqala?
1 Photoshop: Iimpawu ezisisiseko kunye neMisebenzi
2 Isifundo: Hlaziya ubungakanani bomfanekiso kwiPhotoshop
2.1 Inketho 1: Isixhobo soMfanekiso woMfanekiso
2.2 Indlela yesi-2: Ubungakanani beCanvas
2.3 Indlela yesi-3: Isixhobo sokuTyalwa
2.4 Inketho yesi-4: Guqula isixhobo soMfanekiso
3 Iiwebhusayithi zokukhuphela imifanekiso
Photoshop: Iimpawu ezisisiseko kunye neMisebenzi
Umthombo: BR Atsit
Photoshop sesinye sezicelo ze-Adobe ezinikezelwe ekucofeni umfanekiso okanye ukuhlela umfanekiso. Yinkqubo esetyenziswa ngokubanzi ngabayili kunye nabafoti, apho uninzi lwaba basebenzisi luyisebenzisa kwizixhobo ezinjengeekhompyuter okanye iitafile.
Iinkampani ezininzi kunye namacandelo aqalise kule nkqubo intsha, kuba ithathwa njengeyona nkqubo ilungileyo yokuzalisekisa imisebenzi ephambili esiyikhankanyileyo ngasentla. Eyona nto imangalisayo ngale nkqubo kukuba yenzelwe zombini iinkqubo zeWindows kunye ne-IOS.
I-Photoshop yinkqubo esebenza kunye ne-bitmaps kunye nemigangatho. Ngaphandle koko, ikwavumela ulawulo lwezinye iifomati, ukuze sisebenze ngendlela ekhululekileyo kuba sinefomathi efana neJPG, PNG, PDF, njl.
Inoluhlu olubanzi lwezixhobo eziya kukunceda usebenze ngcono kwaye ufezekise iziphumo ezintle. Umzekelo, ukuba ujonga kwibar yesixhobo ekwicala lasekhohlo lephaneli yokuqala, ungabona ukuba njani Iintlobo ezimbini zeebhokisi zezixhobo zenziwe, eyokuqala ibandakanya ezona zixhobo zisisiseko kwaye eyesibini ibandakanya izixhobo ezingaqhelekanga.
Kwi-Photoshop asikwazi ukuzinikela kuphela kwi-photographing retouching, kodwa kwakhona Inethuba lokuyila kunye nokudala ukusuka ekuqaleni, i-mockups. Ii-mockups luhlobo lokulinganisa kwinto ethile. Zisetyenziswa kakhulu kwi-branding okanye kwisazisi senkampani, kwaye kwiPhotoshop, unokuzidala kwaye uziguqule zibe zizinto ezikrelekrele ukuze ukwazi ukuzisebenzisa kwaye uzihlele.
Unokwenza iiwallpapers ezinopopayi, ukongeza, inenxalenye esebenzisanayo ngakumbi. Apho unokwenza khona iiGIFS. Unako kwakhona ukwenza iintetho, ezifana nezo siziyileyo kwi-Power Point.
Enye inkcukacha ehlala ilungile ukwazi ngale nkqubo kukuba ungaphinda uyila imidiya eyahlukeneyo yentengiso yephulo lakho. Umzekelo, ukuba udale iphulo elinxulumene nokusingqongileyo, unokuyila imidiya oza kuyisebenzisa, kuba Photoshop ikunika ukhetho ukuba unokukhetha imilinganiselo yakho.
Kwaye ukuba siyaqhubeka nokuthetha malunga nobukhulu, ikwanazo iisayizi zesikrini, ngaphaya koko sihlala sikuthatha njengokuprinta, ikwaneefomathi ezahlukeneyo zeefowuni eziphathwayo kunye neetafile.
Ekugqibeleni, kwiPhotoshop ungahlela imifanekiso ngezihluzi zakho okanye ngezinye ezifika zisemgangathweni.
Isifundo: Hlaziya ubungakanani bomfanekiso kwiPhotoshop
Umthombo: Alex Martinez Vidal
Kwisifundo esilandelayo, silungiselele iindlela ezahlukeneyo zokutshintsha okanye ukuguqula ubungakanani bomfanekiso kwi-Photoshop. Ukwenza oku, isifundo senziwe ngeemilo ezine ezahlukeneyo.
Zonke zibonakaliswa yinto yokuba isixhobo esahlukileyo sisetyenziselwa umsebenzi kunye nenjongo. Ungasebenzisa leyo ucinga ukuba kulula ukuyiphatha.
Inketho 1: Isixhobo soMfanekiso woMfanekiso
Into yokuqala esiya kuyenza kukuqhuba i-Photoshop, xa sele siyiqhube kuya kufuneka sijonge umfanekiso, siyivule kwaye siye kwiphaneli ephezulu kwaye. Sicofa kwinketho umfanekiso.
Kwinketho yomfanekiso Olu khetho lulandelayo luya kuvela, oluthi ubungakanani bomfanekiso.
Ifestile iya kuvula apho umfanekiso esifuna ukuwuguqula uya kuboniswa, kunye nobukhulu obuhambelanayo kwiifomathi ezahlukeneyo, bunokuba ngamaphikseli, i-cm okanye i-intshi. Kuya kuba ngcono ukuba unokhetho lweepixels.
Nje ukuba uvule ifestile, kufuneka sibonise kuphela imilinganiselo esifuna ukuba umfanekiso wethu ube nawo., yaye simnika ukuba amkele.
Ngesi sixhobo sinokuphinda sihlaziye umfanekiso, nangona kungeyona nto ifanelekileyo kwezinye iimeko.
Indlela yesi-2: Ubungakanani beCanvas
Enye inketho kukwenza ngesixhobo sobungakanani beseyile, ukuyivula, siya kukhetho olufanayo njengangaphambili, ukhetho lomfanekiso kunye emva koko siya kucofa ku ubungakanani beseyile.
Ifestile efana nale yangaphambili iya kuvela kwakhona, kodwa ayifani. Umahluko phakathi kwesi sixhobo kunye nesangaphambili kukuba, kunye nobukhulu be-canvas, asitshintshi ubungakanani bomfanekiso kodwa. singongeza okanye sisuse iipixels ngokuxhomekeke kubukhulu beseyile.
Ngesi sixhobo, sinokunciphisa umfanekiso, umzekelo, kwimeko ye-hypothetical ukuba inkulu kunobukhulu be-canvas.
Inketho yesayizi yeseyile iluncedo kakhulu kwaye ikwayenye yezona zinto zisetyenziswayo. Ukongeza, ikwakuxelela ububanzi kunye nobude bomfanekiso wakho ngee-intshi. Ukwanalo nenketho yokutshintsha umbala wobungakanani becanvas. Ngokuqhelekileyo, i-canvas idla ngombala omhlophe ngokupheleleyo, kodwa xa ufuna ukuyiguqula, unokukhetha kwezinye iindlela ezininzi. Ngokungathandabuzekiyo sesinye sezixhobo eziphambili kubaqulunqi abaninzi.
Indlela yesi-3: Isixhobo sokuTyalwa
Ukutshintsha ubungakanani bomfanekiso ngesixhobo sokuqhawula, kuya kufuneka sivule kuphela umfanekiso kwaye ngokuthe ngqo, yiya kukhetho sika ngaphandle.
Ukwenza oku, siya kwibar yesixhobo kwaye siya kukhangela i-icon ngendlela yesikwere apho imigca igqame khona. Leyo yinketho yokunquma.
Xa uvuliwe, umfanekiso wethu uya kutshintsha inkangeleko yawo kwaye imilinganiselo emininzi iya kubonakala ikwazi ukunqamla umfanekiso ngobubanzi nangobude.
Xa sele sikhethe isiqwenga, kuya kufuneka sigqibezele intshukumo, ngokhetho lwe yamkela.
Inketho yesi-4: Guqula isixhobo soMfanekiso
Ekugqibeleni, sikwanalo nokukhetha ukusebenzisa isixhobo sokuguqula umfanekiso. Ukwenza oku, sivula umfanekiso kwi-Photoshop, kwaye siya kukhetho luka-EHlela > Guqula > Isikali.
Ngokuthe ngqo xa ucofa, uthotho lweendlela zokukhetha ziya kuvela ongakhetha kuzo, olu khetho ngamanqaku avela kwi-vertex nganye yefoto. Kuya kufuneka siwatsale ngempuku kuphela loo manqaku ukuya kwicala apho sifuna ukuba umfanekiso wenze ubungakanani ngokupheleleyo.
Isixhobo sokuguqula yindlela ekhawulezayo nelula yokutshintsha ubungakanani bomfanekiso.
Iiwebhusayithi zokukhuphela imifanekiso
Iipexels lelinye lawona maphepha ewebhu angcono apho unokufumana imifanekiso yazo zonke iintlobo. Ukongeza, ziyimifanekiso evelele umgangatho wabo ophezulu. Bakhululekile ngokupheleleyo kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, unokukhetha ukukhuphela iividiyo. Kufuneka nje ufake iphepha lewebhu, kwaye kwi-injini yokukhangela, bhala igama olifunayo kwaye ngokukhawuleza inani elikhulu lemifanekiso yomxholo ofanayo owufunileyo kwaye kunye nezifanayo ziya kuvela.
Iifoto ziphawulwa ngobuchwephesha kunye nendalo.
IFreepik lukhetho lwesibini olugqame kakhulu kwaye lolona lusetyenziswa ngabasebenzisi ukukhuphela imifanekiso simahla. Unokukhuphela imifanekiso ngaphandle kokubhaliswa okanye ukubhaliswa kumaphepha, nangona kuyinyani ukuba unomda wokukhuphela.
Awufumani kuphela imifanekiso enomdla kakhulu kunye neyahlukeneyo, kodwa kwakhona Ukwanayo nemifanekiso eyahlukeneyo ekhoyo kwiifomathi zePSD ukuze ukwazi ukuyihlela kwiPhotoshop ngazo zonke iindlela ozifunayo. Ngamafutshane, inketho onokuthi ungaphoswa yiyo, kwaye ikushiya ngokupheleleyo ngaphandle kwezizathu zokungafumani imifanekiso emangalisayo kunye nenomdla.
IShutterstock yenye yeebhanki zemifanekiso ezisetyenziswa kakhulu ngabo bonke abasebenzisi be-intanethi. Inoluhlu olubanzi lwabathengi, abathengisa iifoto zabo ngeli qonga le-intanethi.
Yenye yeendlela zokuhlawula esefashonini ngoku, ke ukuba ufuna umfanekiso othile ovela kumfoti, ungazifumana kule ndawo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeenketho ezikhangayo ingqalelo kakhulu kwabo bangena olu hlobo lweebhanki zemifanekiso.
Ukongeza, nganye yale mifanekiso ineenkcukacha ezilungileyo kakhulu zobugcisa ezifana nomgangatho womfanekiso, ukukhanya kunye nombala.
Kwi-Photoshop, awukwazi ukuphinda uthinte imifanekiso kuphela kodwa utshintshe nobukhulu bayo. Awusayi kuba neengxaki zobugcisa malunga nobungakanani beefoto zakho ngesifundo esikunike sona.
Ukongeza, sinethemba lokuba iiwebhusayithi esikunike zona ziya kuba luncedo olukhulu kuwe kukhangelo lwakho olubanzi lwemifanekiso. Ungangena kwaye ujonge kwaye uthabatheke phakathi kweendidi ezahlukeneyo zemifanekiso abanayo.
Ngoku lithuba lakho lokuzama izixhobo ezahlukeneyo esizicebisile, ngokuqinisekileyo uya kuba yincutshe kwihlabathi lokucofa kwakhona iifoto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Ungawenza njani ubungakanani bomfanekiso kwi-Photoshop
Uzoba njani ukhakhayi kwi-Illustrator
Uyenza njani iPalethi yoMbala kwiPhotoshop